120g Soap Scrub 4500.0 Ks
Better Skin ဆိုတာ ဘာလဲ
Better Skin ဆိုတာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အသားအရေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ် ဖြစ်ပါတယ်… ဒီအမှတ်တံဆိပ်ကို Focus Beauty မှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာဓာတ်ခွဲခန်းနဲ့ စက်ရုံကြီးများမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် စမ်းသပ်တီထွင်ထားတဲ့ ဖော်မြူလာများနဲ့ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ ကုန်ကြမ်းများကို အသုံးပြုပြီး အရည်အသွေးမြင့် အသားအရည် ထိန်းသိမ်းရေးပစ္စည်းများကို အစဉ်တစိုက်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
Better Skin ရဲ့ပထမဆုံးထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိလိုက်တဲ့ ပစ္စည်းက ဘာလဲ
Better Skin ရဲ့ ပထမဆုံးထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းကတော့ သဘာဝကော်ဖီ မန်ကျည်း နနွင်းဆပ်ပြာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံရှိ နာမည်ကျော် စက်ရုံကြီးရဲ့ သုတေသန ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်ခန်းမှာ အကြိမ်ကြိမ် သုတေသနပြု စစ်ဆေးစမ်းသပ်ပြီး အကောင်းမွန်ဆုံး ရလဒ်ရရှိထားသော ဖော်မြူလာအတိုင်း အရည်အသွေးမြင့် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများကို နိုင်ငံတကာ အရပ်ရပ်မှ မှာယူတင်သွင်းပြီး ထုတ်လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး Arabica Coffee Powder ၊ အစွမ်းအထက်ဆုံး အာဖရိကမျိုးရင်းမန်ကျည်း အဆီအနှစ်နဲ့ အရည်အသွေး အကောင်းဆုံးနနွင်းမြစ်တို့ အဓိကပါဝင်ပါတယ်။
Arabica Coffee Powder ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ
_ အသားအရေကို ညစ်နွမ်းစေသော ဆဲလ်သေများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးခြင်းကြောင့် ဆဲလ်သေစုပုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံ၊ တင်ပါးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြားများထဲမှ အမဲအကွက်များ၊ အသားမာများကို ဖယ်ရှားကုသပျောက်ကင်းစေခြင်း။ _အရေပြားအောက်ရှိ နူးညံ့သေးမျှင်သော ဆံချည်မျှင် သွေးကြောလေးများကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမိုကောင်းမွန် မှန်ကန်မြန်ဆန်လာစေပြီး အသားအရေ ဆဲလ်အသစ်ဖြစ်စဉ်ကို တွန်းအားပေးစေခြင်း။ _ အရေပြားယားယံခြင်း၊ အသားအရေပွ၍ မညီမညာဖြစ်ခြင်းတို့အပြင် သွေးကြောအတွင်း စုပုံလာသော အဆီခဲနှင့် အညစ်အကြေးများကြောင့် ဖြစ်လာသည့် လိမ္မော်ခွံသဏ္ဌာန် Cellulite များကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း။ _အညစ်အကြေးနှင့် ချေးညော်များကြောင့် ပိတ်ဆို့နေသော ချွေးပေါက်များကို ပြန်လည်ဖွင့်ဟ သန့်ရှင်းစေသောကြောင့် အရေပြားကျန်းမာရေးက ပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်း။ - အထက်ပါဂုဏ်သတ္တိများကြောင့် ငယ်ရွယ်နုပျို၍ ချောမွတ်တောက်ပသော အသားအရေကို ခဏအတွင်း ပြန်လည်ရယူပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ခြင်း။
အာဖရိကမျိုးရင်း မန်ကျည်းအဆီအနှစ်ရဲ့ အစွမ်း
_မန်ကျည်းအဆီအနှစ်တွင် ပါဝင်သော ကြွယ်ဝသည့် A H A (Alpha hydroxyl Acids) ကြောင့် အသားအရေကို ကောင်းမွန်ကြည်လင်အောင် သန့်စင်ပေးပြီး ကိုယ်ခန္ဓာ၏ သဘာဝ Collagen ဖြစ်စဉ်ကို တွန်းအားပေးစေနိုင်ခြင်း။ _အရေးကြောင်းနှင့် လိုင်းတွန့်များကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း၊ တင်းတိပ်၊ ဝက်ခြံနှင့် အခြားသောမလိုလားအပ်သည့် အစက်အပျောက်များကို ကုသဖယ်ရှားပေးနိုင်ခြင်း၊ နေရောင်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အသားအရေ ပြဿနာများကို ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။
- အသားအရေပွခြင်း၊ မညီညာခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေသောကြောင့် ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ်၊ နေလောင်ကွက်များအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီး အရေပြားပေါ် ဘက်တီးရီးယား ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ - အသက်အရွယ်ကြောင့် ဖြစ်တတ်သော ရင့်ရော်ခြင်းများနှင့် နေဒဏ်၊ လေဒဏ်၊ ရာသီဥတုဒဏ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်သော အရေပြားယိုယွင်းခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ - ဝမ်းဗိုက်၊ ပေါင်၊ ခြေသလုံးစသော နေရာများတွင် ဖြစ်တတ်သော အကြောပြတ်ရာများကို လျော့ကျစေခြင်း။ - ခြောက်သွေ့သော အသားအရေများကို ပြန်လည်စိုပြေလာစေခြင်း။
မိမိအသားအရေကို ဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းလိုသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတိုင်း အသုံးပြုသင့်သော အရည်အသွေးမြင့် နေ့စဉ်သုံး အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသားအရေ မညီညာသူများ၊ အမဲစက်၊ တင်းတိပ်နှင့် ဝက်ခြံများ၊ အသားမာများ၊ အသားအရေ အမဲကွက်များနှင့် ဂျွတ်များကြောင့် စိတ်ညစ်ရသူများအတွက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
မိမိနေ့စဉ်သုံး ဆပ်ပြာကဲ့သို့ ရိုးရှင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း ပိုမိုထိရောက်စွာ အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် အတူပါလာသော Bubble Net လေးနှင့် အမြုပ်များများ မြန်မြန်ထွက်စေရန် တွဲဖက်အသုံးပြုပေးနိုင်ပါသည်။ အသားအရေ ပြစ်ချက်ရှိသော နေရာများကို ရေချိုးသည့်အချိန်တိုင်း နူးညံ့ညင်သာစွာ (၂)ကြိမ်မှ (၃)ကြိမ်အထိ စက်ဝိုင်းပုံပွတ်တိုက်၍ အသုံးပြုပေးပါ။
Scrub Type သဘာဝချေးချွတ်ဆပ်ပြာဖြစ်သဖြင့် ရေချိုးပြီးတိုင်း Body Lotion ကဲ့သို့သော အသားအရေ အာဟာရဖြည့် သုံးစွဲပေးခြင်းဖြင့် အလွန်ထူးကဲ့သော အသားအရေတောက်ပမှုကို (၂)ဆမှ (၃)ဆအထိ ရရှိခံစားရစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသားအရောင်မညီလို့ ယုံကြည်မှုပျက်ဆုံးနေပြီလား 😔 ဝမ်းဗိုက်၊ ပေါင်၊ ခြေသလုံးစတဲ့ နေရာတွေမှာ အကြောပြတ်ရာတွေကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ အသားအရောင်မညီညာလို့ ယုံကြည်မှုတွေပျောက်ဆုံးနေပြီဆို သဘာဝ ကော်ဖီ၊ နနွင်း၊ မန်ကျည်း တို့နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Better Skin Coffee Soap Scrub ကို နေ့စဉ်သုံးလိုက်ပါ။ နေ့စဉ်သုံးဆပ်ပြာလိုမျိုး ရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အတူပါလာတဲ့ Bubble Net လေးနဲ့ အမြှုပ်များများ မြန်မြန်ထွက်လာစေရန် တွဲဖက် အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေ ပြစ်ချက်ရှိတဲ့ နေရာများကို ရေချိုးတဲ့အချိန်တိုင်း နူးညံ့ညှင်သာစွာ ၂ ကြိမ် မှ ၃ ကြိမ်အထိ စက်ဝိုင်းပုံပွတ်တိုက်ပြီး အသုံးပြုပေးမယ်ဆိုရင် အကြောပြတ်များကို လျော့ကျပြီး အသားအရောင်ညီညာကာ ချောမွတ်တောက်ပလာစေပါတယ်။ Better Skin နဲ့ ရေချိုးပြီးတိုင်း New Skiin Lotion လိမ်းဖို့လဲ မမေ့နဲ့နော် Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
ငယ်ရွယ်နုပျို ချောမွတ်တောက်ပစေတဲ့ Scrub Soap 🤎 Better Skin Coffee Soap Scrub မှာ ပါဝင်တဲ့ Arabica Coffee Powder က အသားအရေကို ညစ်နွမ်းစေတဲ့ ဆဲလ်သေများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးတယ် ဆဲလ်သေတွေစုပုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံ၊ တင်ပါးနဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြားထဲမှ အမဲကွက်၊ အသာမာများကို ဖယ်ရှား ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ အညစ်အကြေးနှင့် ချေးညှော်များကြောင့် ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ချွေးပေါက်များကို ပြန်လည်ပွင့်ဟ သန့်ရှင်းစေတာကြောင့် အရေပြား ကျန်းမာရေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုပြီး ချောမွတ်တောက်ပတဲ့ အသားအရေကို ခဏအတွင်း ပြန်လည် ရယူပိုင်ဆိုင်စေပါတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးမရွေး အသားအရေမညီညာသူများ၊ အမဲစက် တင်းတိပ်နဲ့ ဝက်ခြံများ၊ အသားမာများ၊ အသားအရေ အမဲကွက်များနှင့် ဂျွတ်များကြောင့် စိတ်ညစ်ရသူများအတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
မြင်သူတိုင်း ငေးနေစေမယ့် အသားအရေလေး ပိုင်ဆိုင်ချင်လား ☺ မြင်သူတိုင်း ငေးမော အားကျနေစေရမယ့် တောက်ပတဲ့ အသားအရေ ရရှိဖို့ဆိုရင် Better Skin Coffee Soap Scrub နဲ့ နေ့စဉ် ရေချိုးပါ။ သဘာဝ ကော်ဖီ၊ မန်ကျည်း၊ နနွင်း တို့ ပါဝင်တဲ့ Better Skin Scrub က အသားအရေ မညီညာခြင်း၊ ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ အမဲစက် တင်းတိပ်နှင့် ဝက်ခြံများ၊ အသားမာများ၊ အသားအရေ အမဲကွက်များနဲ့ ဂျွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံးဆပ်ပြာလို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အသုံးပြုနိုင်ပြီး အချိန်တိုအတွင်း ပိုမို ထိရောက်အောင် အသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် အတူပါလာတဲ့ Bubble Net လေးနဲ့ အမြှုပ်များများ မြန်မြန်ထွက်လာအောင် တွဲဖက် အသုံးပြုပေးနိုင်ပါတယ်။ Better Skin Scrub နဲ့ ရေချိုးပြီးတိုင်း New Skiin Lotion လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေ တောက်ပမှုကို ၂ ဆမှ ၃ ဆ အထိ ရရှိ ခံစားရေစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
လူရော စိတ်ရော ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားစေမယ့် Scrub Soap ? တန်ဆောင်တိုင် ပိတ်ရက်လေးမှာ Better Skiin Coffee Soap Scrub နဲ့ ရေချိုးပြီး အပမ်းဖြေလိုက်ကြရအောင်နော် ? သဘာဝ ကော်ဖီ၊ မန်ကျည်း၊ နနွင်း တို့နဲ့ ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Better Skin Coffee Soap Scrub ကို နေ့စဥ်သုံးဆပ်ပြာကဲ့သို့ ရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အညစ်အကြေးနှင့် ချေးညှော်များကြောင့် ပိတ်ဆို့နေတဲ့ ချွေးပေါက်များကို ပြန်လည်ပွင့်ဟ သန့်ရှင်းစေတာကြောင့် လူကို ပေါ့ပါးလန်းဆန်းသွားစေပါတယ်။ ကော်ဖီရနံ့လေးကြောင့်လဲ စိတ်ကို ကြည်လင်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှ အစက်အပျောက်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပြီး အသားအရောင်ကိုလဲ ညီညာစေပါတယ်။ အကြောပြတ်ရာများကို လျော့ကျစေပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည် စိုပြေလာစေပါတယ်။ Scrub Type သဘာဝ ချေးချွတ် ဆပ်ပြာဖြစ်သဖြင့် ရေချိုးပြီးတိုင်း New Skiin Body Lotion ကဲ့သို့သော အသားအရေ အာဟာရဖြည့်သုံးစွဲပေးခြင်းဖြင့် အလွန်ထူးကဲသော အသားအရေ တောက်ပမှုကို ၂ဆမှ ၃ဆ အထိ ရရှိခံစားရစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံ၊ တင်ပါးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြားများထဲမှ အမဲကွက်များကို ဖယ်ရှားပေးတယ် ?? Better Skin Coffee Soap Scrub မှာ ပါဝင်တဲ့ Arabica Coffee Powder က အသားအရေကို ညစ်နွမ်းစေတဲ့ ဆဲလ်သေများကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားပေးပြီး ဆဲလ်သေစုပုံမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံ၊ တင်ပါးနှင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြားများထဲမှ အမဲကွက်များ၊ အသားမာများကို ဖယ်ရှားကုသ ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ နေ့စဉ်သုံးဆပ်ပြာကဲ့သို့ ရိုးရှင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ပြီး ရေချိုးပြီးတိုင်း New Skiin Lotion လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေလေး စိုပြေတောက်ပမှုကို ၂ ဆမှ ၃ ဆ အထိ ရရှိ ခံစားရစေမှာပါ။ Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
နနွင်းမြစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးများ ? Better Skin Coffee Soap Scrub မှာ ပါဝင်တဲ့ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး နနွင်းမြစ်ရဲ့ ကောင်းကျိုးလေးတွေကို ပြောပြပေးမယ်နော် ? နနွင်းမြစ်က အသားအရေပွခြင်း၊ မညီညာခြင်းတို့ကို ပျောက်ကင်းစေတာကြောင့် ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ်၊ နေလောင်ကွက်များအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာဝလက်ဆောင်ဖြစ်ပြီး အရေပြားပေါ် ဘက်တီးရီးယား ပြန့်ပွားမှုကို ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ပေးနိုင်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ ရင့်ရော်ခြင်းများနှင့် နေဒဏ်၊ လေဒဏ်၊ ရာသီဥတုဒဏ်များကြောင့် ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ အရေပြား ယိုယွင်းခြင်းများကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်၊ ပေါင်၊ ခြေသလုံးစတဲ့ နေရာများမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောပြတ်ရာများကိုလည်း လျော့ကျစေပါတယ်။ ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေများကိုလည်း ပြန်လည် စိုပြေလာစေပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး နနွင်းမြစ် ပါဝင်တဲ့ Better Skin Coffee Soap Scrub ကို ပုံမှန်သုံးပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေ စိုပြေကာ အသားအရောင် ညီညာလာပြီး အကြောပြတ်ရာများလဲ သက်သာလာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Better Skin Coffee Soap Scrub နဲ့ ရေချိုးပြီးတိုင်း New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion လေး လိမ်းဖို့လဲ မမေ့နဲ့နော် Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
ခန္ဓာကိုယ်အသားအရေမှာ အမဲကွက်တွေကြောင့် အသားအရောင် မညီညာလို့ စိတ်ညစ်နေလား ? Better Skin Coffee Soap Scrub က ခန္ဓာကိုယ် အသားအရေမညီညာသူများ၊ အမဲစက် တင်းတိပ်နှင့် ဝက်ခြံများ၊ အသားမာများ၊ အမဲကွက်များနှင့် ဂျွတ်များကြောင့် စိတ်ညစ်ရသူများအတွက် မရှိမဖြစ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ Arabica Coffee Powder ၊ အာဖရိက မျိုးရင်း မန်ကျည်းအဆီအနှစ် ၊ အရည်အသွေးအကောင်းဆုံး နနွင်းမြစ် တို့ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိ နဲ့ အစွမ်းတွေက ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိတဲ့ အမဲအကွက်များ၊ အသားမာများ၊ အစက်အပျောက်များကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါတယ်။ Scrub Type သဘာဝ ချေးချွတ် ဆပ်ပြာဖြစ်သဖြင့် ရေချိုးပြီးတိုင်း New Skiin Body Lotion ကိုလိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေတောက်ပမှုကို ၂ ဆ မှ ၃ ဆ အထိ ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်
လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို အပြည့်အဝခံစားရရှိစေမယ့် ...... ? စိတ်ပင်ပမ်း၊ လူပင်ပမ်းပြီး စိတ်တွေရှုပ်ကာ ငြီးငွေ့နေပြီလား? ဒါဆို Better Skin Coffee Soap Scrub နဲ့ ရေချိုးပြီး New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion လေးသုံးလိုက်နော် ? Better Skin Coffee Soap Scrub က အရေပြားအောက်ရှိ နူးညံ့သေးမျှင်တဲ့ ဆံချည်မျှင်သွေးကြောလေးများကို လှုံ့ဆော်ပေးတာကြောင့် သွေးလည်ပတ်မှုကို ပိုမို ကောင်းမွန်မှန်ကန်မြန်ဆန်လာစေပြီး ကော်ဖီရနံ့လေးကြောင့် စိတ်ကိုလဲ ကြည်လင်လန်းဆန်းလာစေပါတယ်။ Scrub Type သဘာဝ ချေးချွတ် ဆပ်ပြာဖြစ်လို့ ရေချိုးပြီးတိုင်း New Skiin Whitening Tone Up Body Lotion နဲ့ လိမ်းပေးမယ်ဆိုရင် အသားအရေတောက်ပမှုကို ၂ ဆ မှ ၃ ဆ အထိ ရရှိခံစားရစေမှာပါ .... ? Soap နဲ့ Body Lotion ရဲ့ သင်းပျံ့တဲ့ ရနံ့လေးတွေကြောင့် တနေကုန် ပင်ပမ်း နွမ်းနယ်နေတာတွေ ချက်ချင်းဆိုသလို ပျောက်ကွယ်သွားပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွမှုကို အပြည့်အဝခံစားရရှိစေမှာ အသေချာပါပဲနော် ? Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ် New Skiin Whitening Tone up Body Lotion (300 ml) တစ်ဘူး - ၂၂,၀၀၀ ကျပ်
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ?ဆဲလ်သေတွေကို Better Skin Coffee Soap Scrub နဲ့ ဖယ်ရှားလိုက်ပါ ? ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေပြားပေါ်မှာ ?ဆဲလ်အသေတွေဆိုတာ ရှိတတ်ပါတယ်… ရေချိုးလိုက်တဲ့အခါ ဆဲလ်သေတွေကို သေချာ မဖယ်ရှားဘူးဆိုရင် ဆဲလ်အဟောင်းတွေက အရေပြားပေါ်မှာ ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။ ဆဲလ်သေတွေစုပုံမှုကြောင့် အရေပြားက ခြောက်သွေ့ပြီး ညစ်လာမယ်၊ မာကျောလာမယ်၊ အသားအရေတွေ ဝင်းပမှု မရှိတော့ပါဘူး။ ? Better Skin Coffee Soap Scrub ကို ပုံမှန် နေ့စဉ် အသုံးပြုပြီး အသားအရေညစ်နွမ်းစေတဲ့ ဆဲလ်သေတွေကို ထိရောက်စွာ ဖယ်ရှားနိုင်ပါတယ်။ ☺️ Soap မှာ ပါဝင်တဲ့ Arabica Coffee Powder က ချိုင်း၊ ပေါင်ခြံ၊ တင်ပါး နဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကြားတွေထဲမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ အမဲကွက်၊ အသားမာ စတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖယ်ရှားပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ အသားအရေဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကိုလဲ တွန်းအားပေးတာကြောင့် အသားအရေ ညီညာလာပြီး ဝင်းပလာစေပါတယ်။ Better Skin Coffee Soap Scrub (120 g) တစ်တုံး ၄,၅၀၀ ကျပ်